I-Apple inokuthenga i-Shazam kunye nenkqubo yayo yokwazisa umculo | IPhone iindaba
Amaxesha ngamaxesha sidibana nenkampani encinci encinci efunyenwe yiApple, ngokubanzi amagama angaziwa kwaphela kuninzi kodwa zizinto eziphambili kwimicimbi ethile esebenza kuyo inkampani. Kodwa amaxesha ngamaxesha igama libonakala laziwa kubo bonke abakwizihloko zawo onke amajelo osasazo kuba iApple iwahlawulele isigidi.l. Kwakunjalo ke ngeeBeats, uphawu olwaziwayo lwee-headphone kunye nezithethi, kwaye kubonakala ngathi iyakuphela ikunye noShazam, inkonzo yokwamkelwa komculo.
Ngoku ka TechCrunch, inkampani yaseCupertino yayisele iza kuba semngciphekweni Bhengeza ukufunyanwa kweShazam ngesixa esingathelekisekiyo se-400 yezigidi zeedola, ngaphantsi kwe-1000 yezigidigidi zeedola yaxabiswa kwiminyaka emibini edlulileyo. Ngaba uShazam unayiphi indima ngaphakathi kweApple?
Kunzima ukudibana nomntu ongakhange asebenzise uShazam ngaxa lithile. Inkqubo yokwamkelwa komculo yaba yindumasi kwiminyaka eyadlulayo, ukuya kuthi ga kwintengiso ezininzi ilogo yesicelo yabonakala ukubonisa ababukeli ukuba bangasebenzisa iapps ukuqonda umculo owawudlala ngelo xesha. Kuba i-iOS 8 Shazam idityaniswe kwi-Siri, kwaye ungacela umncedisi ka-Apple kumculo odlalayo, kwaye uya kusebenzisa le app ukuyichonga.
Shazam isebenzisa eyaziwayo ngoku "Ukufunda ngomatshini" ukuchonga iingoma ezivakalayo, kwaye oku kunokuba ngumdla weApple yinkampani, kunokufumana usetyenziso lokwazisa umculo. Kukho iminyaka yamava kule ntsimi kunye nolwazi oluninzi oluqokelelweyo olunokunceda iApple iphucule le nto yokusebenza kwayo. Umsebenzi wokuthenga ungabhengezwa kwiveki ezayo kuba imithombo ibonisa ukuba phantse yonke into sele kuvunyelwene ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple inokuthenga i-Shazam kunye nenkqubo yayo yokwazisa umculo
Oku kukunikezelwa kokuqala kwe-iPhone XC enokwenzeka